0 Tuesday December 04, 2018 - 11:22:17
0 Tuesday December 04, 2018 - 11:13:27
Waxaa cirka iskusii shareeray khilaafka u dhaxeeya hoggaanka maamulka isku magacaabay Puntland ee fadhigiisu yahay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal.
0 Monday December 03, 2018 - 20:53:17
Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in duqeymo aan wax khasaara ah dhalin ay ciidamada Cirka Xabashida Itoobiya ka geysteen deegaanno katirsan gobolkaas.
0 Monday December 03, 2018 - 20:51:17
0 Monday December 03, 2018 - 19:08:57
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar khasaara dhaliyay oo ka dhacay degmo dhacda xuduud beenaadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya ee gobolka Gedo.
0 Monday December 03, 2018 - 15:04:13
Xoogag hubeysan ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro dilal ah ka fuliyay qaar kamid ah degmooyinka gobolka Banaadir.
0 Monday December 03, 2018 - 12:20:14
0 Sunday December 02, 2018 - 20:51:27
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax aad u xooggan oo maanta gelinkii dambe ka dhacay degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho.
0 Sunday December 02, 2018 - 11:51:40
Askar kasoo goostay DF ayaa isku dhiibay Xarakada Al-Shabaab kuwaasoo lagu soo bandhigay gobolka Sh/Hoose.
Qaar Kamid Ah Waddooyinka Muqdisho oo Dhagxaan Lagu Gooyay.
0 Sunday December 02, 2018 - 11:28:08
Xilli ammaanka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho uu faraha kasii baxayo ayay dowladda Federaalka markale dib usoo celisay dhagxaantii waddooyinka lagu goyanayay.
0 Sunday December 02, 2018 - 10:13:06
0 Saturday December 01, 2018 - 20:00:43
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay qaraxyo saacadihii lasoo dhaafay ciidamo katirsan dowladda Federaalka Soomaaliya lagula beegsaday deegaanno katirsan labada shabeelle.
0 Saturday December 01, 2018 - 13:10:52
Khilaaf hor leh ayaa soo kala dhaxgalay hoggaanka ugu sarreeya dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Saturday December 01, 2018 - 13:09:52
0 Saturday December 01, 2018 - 12:10:03
Maxkamadda sare ee wadanka Burundi ayaa soo saartay warqad amraysa in lasoo xiro Pierre Buyoya oo ah madaxweynihii hore ee wadankaasi maamulayay mudadii uu socday dagaalkii sokeeyay.
« Prev1234567 ... 267Next »